Global Voices teny Malagasy » Goatemala: Mpampianatra vazimba sy mpanakanto nalaina an-keriny ary novonoina ho faty · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Aogositra 2010 20:29 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika zhhantar
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Ady & Fifandirana, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Mitombo ny savorovoro-na herisetra any amin'ireo vondrom-piaraha-monina maro samihafa any ambanivohitr'i Goatemala. Tamin'ity indray mitoraka ity, mpampianatra manana ny maha-izy azy, mpitarika am-panahy, mpandihy ary mpanakanto ao amin'ny Sololá  i Lisandro Guarcax no niharany .
Nisy naka an-keriny i Lisandro tany an-dalana ho any an-tsekoly iray any ambanivohitra izay ampianariny , any Chuacruz, Sololá. Hita teny amin'ny vata mangatsiakany ireo dian'ny fampijaliana natao azy araka ny tatitry ny mpiasa nanamarina ao amin'ny Ivotoerana ara-koltoraly Sotz´il Jay [es] , toerana izay niasan'i Lisandro amin'ny maha-tale azy . Nitatitra mikasika ny loza ihany koa ny bilaogy Colectivo El Papel [es] , Red Maya (Tambazotra Mayan ) [es] , ComunicArte [es],  The Pavarotti Center [es] ary ny Quahutemallan [es] . Misaona ny fampijaliana sy ny famonoan-ko faty natao an'i Lisandro ireo mpanakanto sy ireo vondrom-bazimba .
Manolotra fanaovam-beloma sy tononkalo [es]  ho an'ny namany sy mpitarika azy ny poeta vazimba Rosa Chávez
Amin'ny maha Talen'ny Ivotoerana ara-koltoraly Sotz´il Jay azy, niasa tany Sololá i Lisandro niaraka tamin'ny tambazotram-bazimba tanora Kaqchikel , manavotra iny dihin'ny hispanika taloha sy ny fomba amam-panao am-bava , araka ny hita eto amin’ ity horonan-tsary ity .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/28/8587/
 Ivotoerana ara-koltoraly Sotz´il Jay [es]: http://sotziljay.wordpress.com/
 Red Maya (Tambazotra Mayan ) [es]: http://www.redmaya.org/2010/08/27/asesinan-a-profesor-y-artista-kaqchikel-de-solola-coordinador-del-centro-cultural-sotz%E2%80%99il-jay/
 fanaovam-beloma sy tononkalo [es]: http://santatirana.blogspot.com/2010/08/lisandro-sabemos-que-tu-corazon-esta.html
 ity horonan-tsary ity : http://www.youtube.com/watch?v=bqIRuVl0vFQ